Mozika "Rock" :: Hiaka-tsehatra indray ny tarika Green • AoRaha
Mozika « Rock » Hiaka-tsehatra indray ny tarika Green
Etsy amin’ny No comment bar, Isoraka indray no fotoana hifanomezan’ny tarika Green hiarahany amin’ireo mpankafy azy. Anio, amin’ny 8 ora alina no hanafana ny sehatra amin’ny alalan’ny mozika “rock” voiziny izy ireo.
Efa tany amin’ny taona 1987 tany no niforona ny tarika Green, saingy mbola tafapetraka any am-pon’ny mpankafy sady manana ny anjara toerany eo amin’ny tokotaniben’ny “rock malagasy” izy ireo hatramin’izao. I Jacquot no hihira, i Jimmy Poun no ho eo amin’ny fitendrena ny gitara akaostika, i Blue kosa hitendry ny gitara beso, Rado no handravaka azy eo amin’ny “piano” ary i Andry na Rabanane no hidoboka ny ampongamaroanaka.
Anisan’ireo hira be mpitia indrindra hovetsoin’ireto mpanakanto ireto mandritra ny fampisehoana hataony ny “Fo roa”, “Veloma farany”, “Fiainam-baovao”, sy ny sisa. Tsy ho latsa-danja amin’ireo hetsika efa nandraisan’ny tarika Green anjara ity hotanterahiny ity, araka izany.
Rakikira vaovao :: Namoaka ny « gasyTsara » i Arison Vonjy
Tontolon’ny fampandihizana :: Hizara kanto eto Antananarivo sy Antsirabe i Dj Da sy Skill Dj Krazy Ice